Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် FaceTime ခေါ်ရန်လုပ်လုပ်နည်း
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် FaceTime
FaceTime အသံ ခေါ်ဆိုမှု၏ဿုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်ငြိမ်၏အကောင့်ပေါ်ရှိအခြား Apple က device ကိုအသုံးပြုသူများနှင့်စကားပြောကာမယုံနိုင်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ iPhone, iPad မှသတ်မ. သငျသညျကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် သင့်ရဲ့ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် FaceTime အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, အဖြစ်ကောင်းစွာ. မည်သို့ပင်သင် Siri သို့မဟုတ်ဖုန်းလျှောက်လွှာအသုံးချဖို့ပါတယ်ရှိမရှိ၏, တစ်ဦး FaceTime ခေါ်ဆိုခချပြီးလုံလုံလောက်လောက်ရိုးရှင်း.
1 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် Siri ကို အသုံးပြု. FaceTime ဖုန်းခေါ်ရန်ကဘယ်လို
2 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်ဖုန်း App ကိုသုံးပြီး FaceTime ဖုန်းခေါ်ရန်ကဘယ်လို
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် Siri ကို အသုံးပြု. FaceTime ဖုန်းခေါ်ရန်ကဘယ်လို
ပြောရမည်မှာ “Siri ကိုမင်္ဂလာပါ“, ဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူအပေါ်စာနယ်ဇင်းနှင့်ကိုင်, ဒါမှမဟုတ်ကိုထိပုတ်ပါ Siri ကို gadget က အမှု၌သင်တို့ကိုအပေါ်ကအသုံးချဖို့နေ Siri ကိုလက်ပတ်နာရီကိုမျက်နှာ.
ပြည်နယ် “FaceTime (အဆက်အသွယ်၏အမည်ကို)“.
သင့်ရဲ့ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့လက်ရှိအသုံးချဖို့သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ကိုပဌနာကိုဆက်လက်ဦးမည် FaceTime အသံ.
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်ဖုန်း App ကိုသုံးပြီး FaceTime ဖုန်းခေါ်ရန်ကဘယ်လို
ဖွင့်ပါ ဖုန်းကိုလျှောက်လွှာ သင့်ရဲ့အပေါ် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့.
ယင်းအပေါ်ကိုထိပုတ်ပါ ထိတှေ့ သငျသညျခေါ်ဆိုခဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်အတူ.
ကိုထိပုတ်ပါ FaceTime အသံ.
၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ပြီးပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်လည်းပါဝင်သည်သောဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် FaceTime. အသုံးပြုမှုအားပေးပြီးမှအဖြစ်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် FaceTime Siri သို့မဟုတ် Apple က App ကိုသုံးပြီး.
အောက်မှာ Filed: FaceTime Download Tagged နှင့်အတူ: Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ် FaceTime ခေါ်ရန်